မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Meteor Garden Vs Hana Yori Dango Vs Boys Before Flowers
Posted by mabaydar at 9:51 AM
thank you, and bravo..
i hav watched all three dramas as well...thinking back..i dun like taiwan drama..maybe, i liked that time i watch :D
So what's your favorite among them?? Actually TW drama is too draggy for me too. I like best bcoz of the Cast,male lead, female lead and 2nd male lead.
Actually I might like Korea version if it's not for Jan Di.
တလုံးမကျန် သေချာကို ဖတ်သွားတယ်။
တကယ်ကို ၀င်ရောက်ခံစားပြီးနှိုင်းယှဉ်ပြထားတာပဲ။ ကောင်းလိုက်တာ.. ကျေးဇူး....
မဗေဒါ ဒါရိုက်တာလုပ်ပါလား အောင်မြင်မှာ ...
အချွန်နဲ့ မတာ မဟုတ်ဘူးနော် တကယ်ပြောတာ.. ဟိး)
yeah. me too. I dun like the korea actress. She acted over innocent and over action.
Dar Bay said...
Ma Baydar is the best.
အကြိုက်ချင်းတူတူပဲ။ ကိုးရီးယားကားက မင်းသမီးကို အပိုင်း၁မှာတင် ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရလို့ ဆက်ကိုမကြည့်တော့တာ။ F4 ကားဆိုရင် ထိုင်ဝမ်ကားကိုအကြိုက်ဆုံး။ ခဏခဏပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်တော့မှမရိုးဘူး။ ဆန်းချိုက် အဖေအမေအခန်းကိုတော့ ကျော်ကြည့် :P ။ ဂျပန်ကားလေးလဲ မဆိုးဘူး ကြိုက်တယ်။ ထိုင်ဝမ်ကားက မင်းသားမင်းသမီးကို အကြိုက်ဆုံး။
Yes.. me too. I've watched Meteor garden again and again.. I think abt6times. The story line might bealittle bit draggy. but bcoz of the leads the movie is great.
me too...Like Taiwan-Meteor Garden most especially the background music....
7/14/2009 4:43 PM
ညီမလေးနဲ့ရော miyone နဲ့ ရော ကိုရီးယားမင်းသမီးပေါ်မှာ အမြင်ချင်းတူတယ်။ သူ့ ကြောင့်ပဲ အဲဒီကားကို အစအဆုံးမကြည့်ဖြစ်တာ။ ဒါပေမယ့် အရန်အတွဲလေးကြိုက်လို့BOF ကို ဖြတ် ဖြတ် ကြည့်ဖြစ်တယ်။
မဗေဒါရေ ကျေးဇူးပါနော်.. အသေးစိတ်ကိုရေးထားလို့.. ညီမလည်း ထိုင်ဝမ်ကားပဲကြိုက်တယ်.. ၂ ခါတောင်ပြန်ကြည့်ပြီးပြီ..
မမ အော်စကာဆု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှာတောင် ပါလို့ရနေပြီ.. စတာဟုတ်ဖူး.. အတည် တကယ်
7/14/2009 5:31 PM
I like Taiwanese Version the most. I simply hate the female lead in Korean Version. She always act innocent but actually she looks dumb.
From my personal view, Taiwanese male and female lead is the best.
I like korean version and japanese version..but i don't like korean version actress when act too much n everyone loves her whatever she does
i like japanese actress
If you like to download Twainese version,
I like TW version the most, too.
7/15/2009 1:15 PM
BTW, It is the best post. Usually I'm quite bored to read your Drama post. But this post is really good in term of the way you describe and visualize the differences.
Ma Baydar, You are the best.
SZA - Yes, asastory line and the way they arrange the story, I like korean version the most.
But as for the Cast, I like TW version the most.
For JP version, there is no like or dislike. So it goes normal. Coz i hate the female lead cast from Korean version.
Racheal - Bcoz normally when i write about the Drama, I just write the story and cast but this time I made the comparison and I criticizied them. Usually i don't criticized coz i think i stand no place to criticized the professional. But this time I feel really suffocated and let my voice out.
7/15/2009 8:37 PM
Hi Tay - Thank you very much for your sharing and i do appreciate that. I hope you would share this kind of information again. Till now i have been watching this drama from free streaming website and i really feel bad about it.
So as for this Drama, I would buy the original version just to acknowledge and encourage their effort.
Manga တော့ဖတ်ဖူးတယ်...ရုပ်ရှင်ကဘယ် version ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာ..နှိုင်းယှဉ်ပြီးရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါမမ...
အစ်မတော့ Metor garden နဲ့ Boys Over Flowers ဘဲ ကြည့်ရသေးတယ်။ ဂျပန်ဗားရှင်း မကြည့်ရသေးဘူး။ နေရာတော်တော်များများမှာ အစ်မနဲ့ မဗေဒါနဲ့ အမြင်ချင်းတူတယ်။ အစ်မလည်း ထိုင်ဝမ်ကားထဲက ခေါင်းဆောင် မင်းသား မင်းသမီးကို သဘောကျတယ်။ ကိုးရီးယား ဗားရှင်းက မင်းသမီးကို လုံးဝ ကြည့်မရဘူး။ မင်းသား လေးယောက်လုံး ချောလို့သာ ပြီးအောင် ကြည့်ဖြစ်တာ။ ဒုတိယမင်းသမီးနဲ့ Kim Bum ကယ်လို့ မဟုတ်ရင် အဲဒီကား တော်တော် ပျင်းစရာကောင်းမယ်နော်။
အမေတွေထဲမှာတော့ ထိုင်ဝမ်ကားထဲက အမေကို သဘောအကျဆုံးဘဲ။ ဒီပို့စ်ဖတ်ရင်း သူ့ဆံထုံး မြင့်မြင့်ကြီးကို ပြန်မြင်လာတယ်။ :D
တော်တော်လေးကို စေ့စေ့စပ်စပ် review ရေးထားတာဘဲ။ လေးစားပါတယ် ;)
မဆုမွန်ကတော့ ကိုရီးယားမင်းသားလေးကို ကြိုက်တယ် ချစ်လို့ ခနခန ပြန်ပြည်ကြည့်တယ် ဟိဟိ
9/22/2009 6:21 PM
I've been reading back your old posts and I like how you translate Jerry's character as သောက်မိန်စွတ်. (I hate that guy.) I've been trying to watch that drama for2years now, but I never get pastafew episodes 'cuz I don't understandasingle word beside ရှဲရှဲ
10/21/2010 7:39 PM
အစ်မ ရဲ့Blog ကိုအမြဲ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်
ဒါပေမယ့် Comment တော့မချန်ဖြစ်ဘူး
ဒီ F4 ကားကိုအစ်မနဲ့အမြင်ချင်းတူလို့ ဝင်ရေးလိုက်တာပါသုံးကားလုံးကြည့်ပြီးပြီ ခွေ လည်း၃ခွေ လုံး ဝယ်ထားတာ
ကြည့်တာတော့နိုင်ငံစုံပဲ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေတောင်ပါသေး အစ်မစိတ်ဝင်စားရင်ညွှန်းပေးမယ်လေ
တစ်ချို့ဇာတ်ကားတွေဆိုအစ်မရဲ့ ပို့စ်မှာဝင်ကြည့်ပြီးမှရှာကြည့်ဖြစ်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လည်းဝေမျှပေးပါဦး
11/30/2015 8:00 PM
Anonymous - တစ်ယောက်ချင်းစီဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားအဖွဲ့က မင်းသားတွေက ပိုချောပါတယ်။ မဗေဒါရဲ့ preference အရ ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်မင်းသားနဲ့ ဒုတိယမင်းသားကို ပိုကြိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုပြောလို့ ကိုရီးယားမင်းသားတွေကို မကြိုက်ဘူးမဆိုလိုပါဘူး။ မဗေဒါအမြင်အရ အဲ့ဇာတ်ကောင်ကို ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်မင်းသား သရုပ်ဆောင်တာကို အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ မဗေဒါရေးတဲ့အထဲမှာ မတူတဲ့အချက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတာပဲရှိတယ်။ ဘယ်သူပိုကောင်းတယ် ဘယ်သူမကောင်းဘူးမရေးထားပါဘူး။ တကယ်လို့ အဖွဲ့လိုက်ကို ရုပ်ရည်ချင်း ယှဉ်တာဆိုရင်တော့ ကိုရီးယား F4 က သာရင်သာပါလိမ့်မယ်။